Caymiska Kiraystayaasha / Minnesota.gov
Waa maxay Caymiska Kiraystayaashu? Caymiska kiraystayaasha waxa uu ka ilaaliyaa alaabtaada gaarka ah waxyeelada iyo lumitaanka, oo waxa u ucaymiyaa haddii qof waxyeelo gaadho marka uu joogo dhismahaaga. Qadarka caymiska kiraystayaasha celcelis ahaan waxa uu u dhexeeyaa $15 iyo $30 bishii iyaddoo ku xidhan goobta iyo cabbirka qaybta kirada ah iyo haysashada xeer haysataha..
In la IIbsado ama Aan la IIbsan?
Sida ay tahay xeerka caymis kasta, waa inaad u qiimaysaa dheefta daboolida qaab gaar ah., Daboolida mulkiilahaagu keliya waxa uu daboolaa waxyeelada gaadha dhismaha. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad doonayso inaad ilaaliso alaabtaada gaarka ah, waxaad dooni kartaa inaad ka fekerto xeerka caymiska kiraystayaasha.
Ka sakow alaabta gaarka loo leeyahay, xeerarka qaarkood waxay dabooli doonaa kharashaadka nolosha haddii qaybta dabaqa ee gurigu ama gurigu aan la degi karin iyaddoo sababtu tahay waxyeelada. Dad badan waxay iska dhaafaan daboolidan, sababtoo ah waxay si khaldan ugu qaataan in mulkiilaha dhismaha/mulkiilaha uu leeyahay daboolida caymiska ka ilaalin doonta iyaga wixii kahsaare ah. Tani waa mid ka mid ah xaaladaha, mulkiilayaasha caadi ahaan waxay leeyihiin xeerka dhismaha muuqda ee ay leeyihiin, laakiin malaha alaabta kiraystahu uu gaarka u leeyahay.
Haddii aad la nooshahay dad aad qolka wada degentihiin, qof kasta oo kiraste ahi waxa uu u baahan karaa xeerkooda caymiska ee kiraystaha si loo ilaaliyo alaabtooda sida xeerarka qaarkood keliya waxay daboolaan shakhsi kirayste ah sida ay ka soo horjeedo shay kasta oo kiraysiga lafteeda ah.
Doorashooyinka Aasaasiga ah
Kiraystaasha badankooda xeerarkooda caymska waxay bixisaa labba nooc oo aasaasi ah oo daboolida ah:hantida gaarka ah iyo masuuliyada. Daboolida daynta hnatida gaarka ah waxay bixisaa hagaajinta ama beddelka alaabta gaarka loo leeyahay haddii ay waxyeelo gaadho, burburto, ama la xado.
Masuuliyada caymiska waxay bixisaa daboolida ka soo horjeeda sheegashada ama dacwada ka timid dhaawaca jidhka ama waxyeelada hantida ee kuwa kale oo uu sababay shil marka lagu socday xeer haysaha hantidiiisa.
Noocee baa Adiga kugu Habboon?
Waxaa jira labba xeerarka caymiska kiraystaha cadiga ah:
Qaabka Balaadhan waxa uu daboolaa alaabta gaarka ah wixii ku lid ah dhacdooyinka gaarka ah, sida dabka ama tuugada. Tani waa ta aadka loogu iibka badanyahay xeerka kiraystaha. Daboolida caadiga ah ee qaabkan ka hoosaysa waxay ka mid ah waxyeelada dabka ka timid, hilaaca, qaraxa, qiiqa, burburinta hantida, tuugada iyo waxyeelada biyaha la xidhiidha ee qalabyada dhismaha, Tani waa ta aadka loogu iibinta badanyahay xeerka kiraystaha..
Qaabka Dhammayska tiran waxay bxisaa daboolida dhacdooyinka kala duwan, iyaddoo si gaar ah looga saaro xeerka mooyee. Ka fekerka qadarka dhici kara ee daboolida, qadarka caymiska ee xeerkan waa uu ka sarayn karaa. Goobta sidoo kale waa laga fekeri karaa marka la dooranaypo foomkaaga. Haddii aad ku noo shahay meel u nugul duufaanada roobka, sida roobabka dabaylaha wada, ka fekeri iibsiga xeer dhammaystiran oo si gaaar ah uga hadal waxyelada duufaanka.
Daboolida dheeraadka ah
Haddii si aan caadi ahayn aad u haysato walxo qaali ah, sida dahab aad u wanaagsan xul fan ah, waxaad ka fikiri doonaa ku darid si loo bixiyo daboolid dheeraad ah. Wakiilkaagu waxa uu caawin karaa adigu inaad go’aan ka gaadho haddii wax ku darid dheeraad ah loo baahdo.
Qiimaha Lacagta caddaanka Dhabta ah ku lidka ah. Beddelka Kharashka
Shay aad u mihiim ah oo lagu raadiyo marka wax laga iibsanayo caymiska kiraystayaasha waa Qiimaha lacagta caddaanka dhabta ah oo ku lid ah daboolida Beddelka karashka Marka aanay saamayn doonin qaarka caymiskaaga xiliga gaaban, waxay samayn kartaa faraq wayn oo gudbinta sheegashadaada ah,
Daboolida qiimaha lacagta caddaanka ah ee dhabta ah, sida magacu tibaaxayo, waxay magdhabi doontaa kharashka dhismaha wakhtiga sheegashada, laga jaro jarjaridaada. Waa muhiin in lagu xisaabtamo qiimo rid marka laga fekerayo doorashada daboolida. Tusaale ahaan, haddii aad waydo nidaamka maqalka la iibsaday shan sano ka hor sheegashadaada, waxaa laguu magdhibi doonaa qiimaha hadda ee nidaamka. Natiijada waxay ka hoosaysaa lacag bixinta sheegashada intii aad filaysay.
Kharashka beddelka daboolida, dhanka kale, waxaa uu magdhabi doontaa qiimaha buuxa ee nidaamka maqalka cusub ka dib iibsigaaga nidaamka cusub oo soo gudbi risiidhadaada. Marka kharashka la sii qadimayaa uu ka badanyahay kharashka beddelka daboolida, waxaad aad u dhici karta inada hesho magdhowga alaabtaada.
Qof kastaa ma U baahanyahay Caymiska Kiraystaha?
Had iyo jeer waa fikrad wanaagsan in la qaato feejignaanta si loo ilaaliyo naftaada iyo alaabtaada. Haddii ardayga kulliyadu uu ka yar yahay 26 sano jir, ka diiwaan gashan fasalo oo ku noolyahay guriga goobta waxbarasho, ardaygu waxaa lagu dabooli karaa hoosta waalidka mulkiilayaashiisa ama keeda ama xeerka kiraysiga ee caymiska. Si kastaba ha ahaatee, haddii ardaygu ku nool yahay meel ka baxsan goobta waxbarashdda, laguma dabooli karo xeerka waalidkooda ee khasaaraha ama waxaa keliya oo la doobli karaa qayb khasaaraha suuragalka ah. Celcelis ahaan, qofka ku tiirsan waxaa la daboolaa ilaa 10% heerka waalidka. Mar labbaad ka hubi wakaaladaada caymiska waxa ku saabsan shuruudaha gaarka ah ee xeerkaaga.
Qodobada Kale ee Xiisaha leh ee Ku saabsan Caymiska Kiraystayaasha
Marka sheegashada laga warbixiyo, shirkada caymisku waxay waydiin doontaa haystaha xeerka inuu caddeeyo iibka dhammaan walxaha lagaga warbixiyay sheegashada. Liis dhammaystiran oo alaabta ah, ay ka mid tahay qiimayaasha, lambarada moodeelka iyo lambarada taxanaha ah, ayaa ku filnaan doona. Sidoo kale waa fikrad fiican in la qaado sawiro ama fiidyowyo duuban oo alaabta gaarka ah wixii caddayn ah, oo la hubsanayo in lagu kaydiyay meel amaan ah, oo goob kayd ah.
Markala go’aansanyo inta ay tahay, haddii ay jiraan wax, caymiska kiraystayaasha waa inaad iibsato, qiyaasto qiimaha alaabtaada gaarka ah. Tani waa qadarka caymiska aad u baahan doonto inaad beddesho waxa uu ka koobanyahay gurigaaga haddii wax kasta la burburiyay.
Haddii ardaygu kulliyada uu ku noolyahay guri ka baxsan goobta waxbarashada ama dabaq aad kula jirto mid ka mid ah dhowr kiraystaal ah, waxay awood u yeelan doonaan inay iibsadaan xeerka caymiska si wada jir ah. Xeerarka qaarkood waxay si toos ah u kordhiyaan daboolida qof kasta oo degen ee xeer haystaha qoyska ku habboon qeexida lamaanaha guriga. Hadii kale, ka feker qaadashada daboolid gooni ah oo qof wayn oo kiraysta oo kasta ah..
Waxyaabaha ugu wanaagsan ee aad samayn karto sidii kirayste waa inaad yarayso fursadaha baahida soo xaraynta sheegashada gebi ahaanba addoo codsanaya in mulkiilaha hantidu inuu ku rakibo qalab ku lid ah tuugada ama qalabka badbaadada gudaha dhismaha kirada ah.
Xaaladaha oo dhan, waxaa lagu talinayaa inaad gudbiso xeerkaaga caymiska hadda ama aad la xidhiidho wakiilkaaga marka aad go’aansanayso haddii la iibsanayo ama aan la iibsanayn caymiska kiraystayaasha ee ardayga meel ka baxsan kulliyada.